Pro taariikhqorihii Screen ayaa loo arkaa mid ka mid ah qalab lagu duubo shaashadda ugu horumarsan si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in pro taariikhqorihii shaashadda waa barnaamij ah oo uu soo qiimeeyo sare by users ah oo dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in dadka isticmaala ay leeyihiin waayo-aragnimo aad u wanaagsan marka ay timaado barnaamijkan. Si kastaba ha ahaatee ma aha barnaamijka oo kaliya in loo arkaa qalab ka ugu awooda badan ee arrintan la xiriira. Qaybta dambe ee tutorial ayaa sidoo kale ka wada hadli doonaan qalab awood badan in user a soo bixi kartaa arrintan la xiriira.
Faa'iidooyinka pro taariikhqorihii screen
Top 5 Talooyin ku saabsan pro taariikhqorihii screen
Kii u horreeyey ayaa sababta ugu horreeyey, waayo, in la hubiyo in taariikhqorihii ahaa screen deg deg ah la soo bixi oo gundhig waa xaqiiqda ah in waxa taageeray xoogga Apple Inc. taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka waxaa lagu helay in la xiriira duubo shaashadda iyo shubay. Waxa kale oo hubin doona in user ay u baahan tahay si aad u hesho shaqadii la soo qabtay style iyo fasalka iyadoo la kaashanayo ugu fiican iyo technology ugu horumarsan oo uu soo gundhig ciyaaryahanka gudahood.
Ka dib waxaa la kooxood ee ugu sareysa 5 Talooyin in user ah waa in la hubiyo mar walba raacay sameeyaan si ay natiijada ugu wanaagsan ahbaa iyo duubo ee shaashadda waa ma kulan barnaamijkan. Waxaa sidoo kale in la xuso in inta badan dadka isticmaala ay qiimeeyo barnaamijka xun sida isticmaalka ma ahayn, in heer fiican oo dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in Casharrada in la iman barnaamijka marnaba tashado.
1. Daahfurka ah oo taariikhqorihii ahaa
Qoofalan ayaa sare ee barnaamijka waa qalab ugu fiican haddii Quraankan lagu soo isticmaalay hab ayaa loo arkaa in ay tahay sida ugu fiican ee jeer oo dhan .Waxa Sidaa darteed waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in taariikhqorihii ahaa ayaa laga soo saarey ka dhigi qoofalan halkii ay xaq u riixaya con nidaamka saxaarad ka dibna xulashada recird hadda doorasho. Waxa kale oo hubin doona in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa hab aan fiicnayn iyo arrimaha guud ee diiwaangelinta iyo upka u ah arrin ku saabsan waxaa sidoo kale loo xalin mar oo dhan.
2. qoraalka Goobta
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka feature farshaxanka barnaamijka kaas oo u ogolaanaya user si loo hubiyo in qoraalka waxaa lagu dhejiyay sida baahida loo qabo iyo baahida user ee shaashadda video ah. Xilkaasi waxa uu default ee qoraalka waa video ah oo aan ka soo jeedin oo ay inta badan isticmaala iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user wuxuu hubinayaa in in qoraalka iyo subtitles waxaa lagu dhejiyay sida loo baahan yahay ee kor ku xusan user:
3. Area agagaarka mouse
Shaqeynta ayaa gundhig gudahood barnaamijka sidoo kale u ogolaataa user si loo hubiyo in agagaarka mouse la soo xulay oo ugu wanaagsan iyo gobolka feature barnaamijka fanka la riyaaqay si weyn u kordhin. Waxaa kale oo uu saamaxayaa user si loo hubiyo in tilmaamaha mouse ka video duubay gudahood ayaa waxaa sidoo kale ay gacanta ku iyo natiijada ugu wanaagsan ahbaa arrintan la xiriira. Muuqaal guud oo uu soo gundhig gudahood pro video oo taariikhqorihii ahaa waa isticmaalka weyn iyo sida u qabo qaybta diiwaanka user sidoo kale hubin karaa in in dhowr qaababka kale ayaa sidoo kale sahamiyey si aad u hesho in ka badan oo gudaha aragti marka ay timaado barnaamijka.
4. Resizing aagga duubay
Cusub iyo version casriyayn ee barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka feature tahay ee resize aagga. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo arrin guud ee resizing shaashadda noqdo fudud oo waa la isku dayay karaa sidoo kale. Ayaa gacanta ku haya dhinacyadaada waa in la adeegsadaa iyada oo arrintan la xiriira si loo hubiyo in user helo shaqada lagu sameeyey si degdeg ah oo wax soo saarka video ugu fiican ahbaa fudayd iyo qanacsanaanta.
Meesha 5. Performance
Bedka waxqabadka barnaamijka waa mid ka mid ah in loo isticmaali karo si loo hubiyo in wax qabadka guud ee barnaamijka waxaa maamula in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay hubiyaan in habkaani waxaa loo isticmaalaa si aad u hesho amarka badan oo ku saabsan barnaamijka iyo sidoo kale in la hubiyo in video ama erayada fudud lagu qoro in loo abuuray waa mid ka mid ah in uu yahay sida ugu fiican ee ka dhigi jeer oo dhan.
Wondershare Video Convertor Ultimate waa kama dambaysta ah iyo xalka ugu wanaagsan in laga heli karo suuqa si loo hubiyo in ugu fiican iyo natiijada ugu horumarsan ahbaa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay marka hore sida version tijaabo ah si aad wax u sameeyo oo user Sidoo kale waa in la hubiyo in qodobbada soo socda waxaa loo arkaa halka barnaamijka la bixi.
Barnaamijka ayaa ku soo beegmay iyadoo dhisay taariikhqorihii video awood u qabsaday videos qeexidda wax user uu doonayo inuu iyaga kala soo bixi. The rakibo ugu muhiimsan ee barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in taariikhqorihii video ah waxaa sidoo kale lagu rakibay halkan ka jirin kaaftoomi gaar ah waa in la raaco.
The HD aalladda iyo qaab 4K cusub bilaabay ayaa waxaa sidoo kale ay taageerayaan barnaamijka waxa ugu fiican ee suuqa ee ku samaynaya.
User ayaa sidoo kale edit karaa, download iyo il videos in TV oo halkan waa dhameystiran yahay video xiriira Suite in uu diyaar u yahay user.
Wareejinta waxaa sidoo kale hawlo kale waxaa lagu sameeyaa 30X dhakhso marka loo eego barnaamijyada ee ku sifayn la mid ah.
Taageero DLNA ayaa sidoo kale lagu soo gudahooda taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta ee Madaxweyne Siilaanyo iyo qalabka casriga ah ee la xiriira ku saleysan.
Top 10 Shabakadaha in Watch Free Spanish muujinaysaa TV iyo Movies Online
Dabaaldeg Maalinta Hooyada ayaa la Kuwani cute Baby Xayawaanka iyo Hooyada ay
Sida loo abuuro Funny Videos
> Resource > Video > Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan screen pro taariikhqorihii